ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ CNC ဒေါင်လိုက်စက် မှအရည်အသွေးမြင့် CNC ဒေါင်လိုက်စက် ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. တွင်တည်ရှိသည် Taiwan။ ကျနော်တို့၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ရာတွင်ပါဝင်နေတဲ့ professional စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ CNC ဒေါင်လိုက်စက်။ ကျနော်တို့အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်မှုအမိန့်ကိုကြိုဆိုကြသည်။ ကျနော်တို့ ပို. ပို. အတန်းမြင့်ထုတ်ကုန်များထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုဈေးအချိန်နှင့်တပြေးညီပေးပို့အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ရှယ်ယာပိုမိုချဲ့ထွင်ကြသည်။ ကျေးဇူးပြု ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုသည့်အချိန်တွင်မဆို။
ပုံစံ - VB-1000
Y ကို ၀ င်ရိုးတွင်ဆလိုက်သံလမ်းလေးခုတပ်ဆင်ထားသည်.
သုံးယောက်-ဝင်ရိုးလျှောသံလမ်းအားလုံးကို Turcite နှင့်ကပ်ထားသည်-B ဝတ်ပြားများ.
မြင့်မြင့်လက်ခံပါ-အရည်အသွေးဝက်ဝံများနှင့်ဘောလုံးဝက်အူများ,pre နှင့်လိုက်ဖက်သည်-ချုံ့ခြင်းနှင့်ကြိုတင်-တင်းမာမှု,မြင့်မားသောတိကျသေချာစေရန် optimized axial နှင့် radial force configuration ကိုပံ့ပိုးပေးရန်.
X/Y/Z Axis ခရီးသွား:၁၀၀x၆၁၀x၆၁၀ မီလီမီတာ
Spindle Taper သည်:BT-40
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/cnc-vertical-lathe.html
အကောင်းဆုံး CNC ဒေါင်လိုက်စက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် CNC ဒေါင်လိုက်စက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ